Semalt: Chii Chinonzi Spam Spam? Nzira Yokudzivirira Nayo Sei Muzvikamu Zvitatu Sezvakaita ABC Matanho
Tinoshandisa Google Analytics kutarisa nzvimbo yedu yekutengesa uye kuunganidza data pamusoro pekushanyira nekurova. Zvichakadaro, zvinokoshawo kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pevarume nevatambi uye nzira dzavanoita nadzo masayiti edu. Hackers uye spammers zvinoshandisa kunyengera deta reGoogle Analytics nokuda kwezvinangwa zvedu - get high pr backlinks free. Vanotumira bots nezvimwe zvinhu zvinokuvadza kune nzvimbo dzedu, nokudaro kutitadzisa kuwana zvakanaka zvakanaka injini rankings.
Ivan Konovalov, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutevedzeri, anotsanangura kuti pane maviri makuru emhando dze spam referrals: crawler spam uye mweya spam. Iko mweya spam nguva dzose inogona kunyengedza gwaro reGoogle Analytics pakuvhara kushanyira kunoitwa kana mabhoti asati ashanyira website yako. Chikwata che spam, kune rumwe rutivi, chinonyatsoshanyira webhusaiti yako, asi zvakaoma kuziva kana zvakabatanidzwa muhutano hwako hwehutano kana kwete nokuti bounce rate iri nguva dzose 100%.
Chii chinonzi spw spam?
Parizvino, tinotarisira kuti wakagadzirisa ruzivo rwako pamusoro pekutumira spam uye wakagadzirira kuva nekunzwisisa kwevane spam. Muchirangaridzo spam zvirokwazvo anoshanyira bhurogi rako kana webhutta asi haatauri nehupenyu hwako kana zvinyorwa. Iko rudzi rwe spam runowanzopfuura kupfuura mweya spam nokuti harina kutora mijenya yezvigadziro zvekuvaka crawlers. Ichokwadi, iyo internet yakazadzwa nechepam spam uye inowanzoshandiswa neGoogle, Bing, uye Yahoo kuti inyore nhamba yakawanda yemasayiti. Chinangwa chekukwezva spam ndiko kukwezva vanhu kutenga zvigadzirwa kubva kuhukama hukama. Spammers nevashambadzi vanoenderera mberi vachiparadzira vashambadzi spam bots paIndaneti uye vanoedza kuwana hukama kune dzimwe nzvimbo dzavo. Uyezve, vanoshandisa spam spam kuti vave-kunyora nzvimbo yako kubva kune zvinowanzogadzirisa injini.
Nzira yekudzivirira sei spam spam mumatanho matatu?
Sezvo spam spam inosvika iwe webhusaiti yako, mazita ekutarisa anotarisa akavimbika uye akavimbika..Zvinosuruvarisa, hazvizooneki semweya spam uye panzvimbo pacho zvinowedzera kuwedzera kwekukura kwehuwandu. Izvo zvinokonzera spam zvinoratidza zvakakodzera hostnames uye dzinozviparadzanisa pachedu sekushanyirwa kwakakodzera, asi hazvina chokuita nekuvimbika. Ndicho chikonzero kudzivirirwa kwepamberi spam chiyero chinodikanwa kana uchida kuve nechokwadi chekuchengeteka kwako nekuchengetedza.
Nhanho 1: Ziva dzose dzemashoko epamadzi uye mazita ewebsite:
Kuziva nzvimbo dzose dzepa spam uye nzvimbo, unofanirwa kupinda muGoogle Analytics uye uite zvinotevera:
1. Muchikamu chekuruboshwe, unofanira kufamba nenzira yeChitoro yekuwana;
2. Sarudza Yese Mutokari sarudzo uye enda kuBhodzi Rokufambisa;
3. Munharaunda yekutanga yeGoogle Analytics account, unofanira kufanidza pane Hostname sarudzo kuti uzive spam spam;
Kubva pano, unogona kuona kana crawler spam irikutumira iwe kushanyira kana kuti kwete.
Danho 2: Ita mazwi anowanzoitika:
Kana uchinge wakaziva spam spam, danho rinotevera nderokutaura mazwi anowirirana nenzira inotevera:
Tinoda kukurudzira kuti uise pamwe chete ne Notepad uye TextEdit, kuitira kuti iwe udzokere kumapeji makuru. Iwe haufaniri kuchinja sumo ne "|" - chiratidzo sezvo zvicharambidza mazwi kubva pakuita mabasa avo.
Nhano yechitatu: Gadzira chimiro chetsika uye usabvisa nzvimbo dzepa spam uye mazita ewebsite:
Nhanho yechitatu uye yekupedzisira ndeyokugadzirisa zvinyorwa zvinoshandiswa uye kusabvisa zvese zvinokambaira spam domains. Nokuda kweizvi, iwe unofanira kuyeuka matanho anotevera:
1. Endai kuPurisa yeGoogle Analytics account.
2. Muruvara rwepamusoro, chengetedza bhokisi re All Filters uye sarudza iyo yakatsvukuruka kuwedzera kuisa mafaira.
3. Kana imwe nguva firiji yakasikwa, iwe unofanira kuwedzera mazita echirwere akasingafungi pairi uye usakanganwa kuongorora mafiritsi kuti ave nechokwadi chokuti nyaya dzose dzakabatwa.